2020 – Bachan Tv
Posted on December 22, 2020 December 22, 2020 by BACHAN TV
लूका २ः१८– ती मानिसहरु सम्भवतः हाल इरान भनिने क्षेत्रका शिक्षित, धार्मिक समुदायका सदस्यहरु थिए । यिनीहरुले नक्षत्र शास्त्र, औषधी र प्राकृतिक बिज्ञानमा बिशेष दख्खल हासिल गरेको हुनुपर्दछ ।
ती ज्ञानी, परदेशी ज्योतिषी आनो उद्धारकर्ताको जन्ममा खुसियाली र रमाहट गर्न आएका थिए । येशू समस्त मानवबाट राजकीय आदर पाउन योग्य हुनुहुन्छ ।
यहूदीहरु र गैर–यहूदीहरु पनि उद्धारको योजनामा सामेल गरिएका छन् । मुख्य पुजाहारीहरु आराधनाका जिम्वेवारी पाएका मन्दिरका सेवकहरु थिए । जनताका शास्त्रीहरु निर्वासनको समयपछि पवित्र शास्त्रको प्रतिलिपी बनाउनेहरु थिए । यिनीहरुलाई पुरानो करारको ब्यवस्था सिकाउन र पालन गर्ने तालिम दिएको हुन्थ्यो र तिनीहरुलाई ज्ञाता भनिन्थ्यो । जनताका शिक्षकहरु र मुख्य पुजाहारीको समायोजनाबाट महासभा वा यहूदी संसद र सर्वोच्च
अदालत बनेको हुन्थ्यो । तिनीहरु यहूदीहरुका सामाजिक र धार्मिक मामिला सम्बन्धी जिम्मेवारी पाएका मानिसहरु थिए । रोमीहरुको अधीनमा तिनीहरुलाई उल्लेख शक्ति र अधिकार पनि दिएको हुन्थ्यो । मत्ती २ः१३
मिश्र देशमा भागी हाल हेरोद राजाले येशूलाई मार्ने प्रयत्न गर्नु र परमेश्वरले बालकलाई सुरक्षा दिनुभएको थियो । यही तरिकाले परमेश्वरले आना मानिसहरुलाई अगुवाइ गर्ने र सुरक्षा प्रदान गर्ने सत्यतालाई प्रष्ट गर्दछ ।
यस विषयमा रहेर ध्यान केन्द्रीत गर्दा १) उद्धारकर्ताको जन्मको बारेमा लूका र मत्तीलाई केलाएर हेर्दा सबै समूह र बिभिन्न पृष्ठभूमिका मानिसहरु उहाँलाई आराधना गर्न र भेट्न धेरै टाढाबाट यात्रा गरेका थिए । मुक्तिदाताको जन्म सामान्य भए तापनि विशेष थियो ।
२) ख्रीष्टमस भनेर यहाँ उल्लेख नभए पनि ख्रीष्टको जन्मोत्सव मनाउन भेला भएको कुरालाई कसैले काट्न सक्दैन ।
३) ल्याटिन भाषामा ख्रीष्टको अर्थ उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हुन्छ । मास भनेको भेला हुनु, जम्मा हुनु, एककठा हुनु भन्ने बुझिन्छ । नेपाली ख्रीष्टियन जगतमा वचनको अध्ययन, र सिकाउने क्रममा अगाडि बढ्न हामी पास्टर गुरुबा र शिक्षकहरुलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छु । नेपालमा अहिले झूटा शिक्षाले मण्डलीका भेँडाहरुमा फाटो हाल्ने र भड्काउने क्रम तीब्रगतिले अगाडि बढ्नुमा, अगुवाहरुको भेँडाहरुसँग राम्रो सम्बन्धमा कमी भएर नै हो । भेँडाको स्तरअनुसारको खुराक नपाउँदा पनि यस्ता खालको समस्या आउने गर्दछन् । गाई र भेँडा भोक लाग्यो भने भीरमा गएर उँधोमुण्टो हल्लाएर घाँस खानु र पेट भर्नु सामान्य नै हो । राम्रो क्षिक्षा दिएन भने भेँडा राम्रो खानको लागि अर्को खर्कमा जान्छ ।
नेपाली मण्डलीहरुले शिक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । नक्कली नोटको अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुभन्दा पहिला सक्कली नोटको अध्ययन गर्न सिकाउने समय आइसकेको छ ।
भेँडाले चाहिएको समयमा मीठो, स्वादिष्ट भोजन पाउँछ, तब शैतानले लोभ्याउन सक्दैन । बाइबलले झूटा शिक्षकहरु आएर विश्वासलाई डगमगाइदिन्छ भनेर पहिला नै प्रभुले भन्नुभएको छ (मत्ती २४ः१०–१३) । हामीले झूटा शिक्षकहरुको रुप,
भेष र आचरणको बारेमा पनि पहिले नै बताउन र सिकाउन जरुरी देखिन्छ ।
यशैयाको ९ अध्यायमा संकष्टमा परेकाहरुको निम्ति निराश हुनेछैन भनिएको छ । पहिले त उहाँले जबूलूनको देश र नप्तालीको देशलाई नम्र तुल्याउनुभयो, तर भविष्यमा उहाँले यर्दनका किनारको समुद्र नजिकैको अन्यजातिहरुको गालीललाई सम्मानित तुल्याउनुहुनेछ । अन्धकारमा हिँड्ने मानिसहरुले एउटा ठूलो ज्योति देखेका छन् । मृत्युको छायाँको देशमा बस्नेहरुमाथि एउटा ज्योति उदाएको छ । जबूलून याकूबका दशौं र लेया पट्टीका छैटौं छोरा हुन् । उनका सन्तानले इस्राएलको निम्ति छुट्याएका जमीनमध्ये अरुहरुले भन्दा ठूलो भूभाग अधिकार गरे ।
नप्तालीको (अर्थः कुश्ती लड्ने) याकूब र बिल्हा (राहेल दासी ) का एक छोरा, जसको उल्लेख प्रायः उत्पत्ति ३०ः५ नप्ताली कुलका एक पूर्खा, जुन कुलको नाउँ पुरानो करारको प्रशासनिक सूचीमा प्रायः अन्तिममा आउँछ । यो कुलको भागमा गालील समुद्रदेखि पश्चिममा पर्ने एउटा चैडा भूभाग दिइएको थियो । यसभित्र कनानी सहर हासोर पर्थ्यो, जसले एउटा प्रमुख व्यापारिक मार्गको नियन्त्रणमा गर्‍यो र न्यायकर्ताहरुको सययसम्म यो पुर्णरुपले जितिएको थिएन । यस क्षेत्रमा सम्पूर्ण देशको सबै भन्दा उब्जाउशील जमीनको पनि केही भाग थियो ।
यसबाट बाराक (न्यायकर्ता ४) र गिदोन (न्यायकर्ता ६–७) जस्ता बीरहरुको उदय भयो । अहिलेको नेपालको परिस्थिति र त्यस बेलाको नप्तालीको अवस्था मिल्दोजुल्दो छ ।
मलिलो भूमि नेपाल
बीर गोर्खाली जस्तै गिदोन र बाराक पनि त्यस्तै थिए ।
परमेश्वरले हामी र हाम्रो देशमा ठूलो काम गर्नुभयो र गर्नुहुनेछ । हामी नेपालीहरुको काधँमा लादिएको विभिन्न प्रकारको जुवाहरु चक्नाचुर पारिदिनुभएको छ । हाम्रा बीर गोर्खालीहरुले लडेका लडाइँका सम्झना बिर्साइदिनुहुनेछ ।
लडाइँमा प्रयोग गरेका हरेक सिपाहीका जुत्ता र रगतमा मुछिएको हरेक पोशाक जलाउनलाई छुटाइको हुनेछ र आगोको निम्ति इन्धन हुनेछ । हाम्रो निम्ति एक जना बालकको जन्म भएको छ । हाम्रा निम्ति एक जना छोरा दिइएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ । उहाँ अचम्मका सल्लाहकार र शक्तिशाली, परमेश्वर अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनु हुनेछ । उहाँको शासन र शक्तिको बृद्धिको
कहिल्यै अन्त हुनेछैन । दाऊदको सिंहासन र तिनको राज्यमाथि त्यसलाई न्याय र धार्मिकताको स्थापित गरी स्थिर गराउन, त्यस बेलादेखि सदाको निम्ति उहाँले राज्य गर्नुहुनेछ ।
सर्वशक्तिमान परमप्रभुको जोसले यो पूरा हुनेछ ।
हामी नेपालीहरुको लागि खुशीको खबर यति छोटो समयमा नेपालमा यति धेरै ख्रीष्टियनहरु त्यतिकै भएका छैनन् । उहाँले जुवा भाँचिदिनुभएको छ । नेपालमा राज्य गर्ने हाम्रो येशू राजा नै हुनुहुन्छ । अवश्य पनि हेरोदले जसरी येशूलाई मार्न खोजेको थियो, अहिले हामीलाई विभिन्न तरीकाले हामीलाई मार्न खोज्ने शासकहरु प्रशस्तै छन् । तर हामी लक्ष्यविहिन भएर लर्खराउनु पर्दैन, हाम्रो सल्लाहकार पवित्र आत्मा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ । इम्मानुएल हामीभित्र हुनुहुन्छ ।
हामी कुनै पनि संसारको शक्तिदेखि डगमगिने छैनौं । उहाँ अनन्तका पिता हुनुहुन्छ । हाम्रो चहेरा, रहनसहनमा फरक छ । हामी विभिन्न विगतका पृष्ठभूमिले गर्दा गरिब मुलुकमा जन्मिनु हाम्रो गल्ती वा पाप होइन । येशूलाई उद्धारकर्ता भनेर ग्रहण गरेपछि हामी एउटै सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिताको छोराछोरी हौं ।
कुनै पनि परिवारमा छोराछोरी दैनिक झगडा गर्‍यो भने जन्म दिने बाबाआमालाई किन जन्माएछु भनेर पीडा हुन्छ । हामी ख्रीष्टियन समुदाय एक भएनौं भने हामीलाई शैतानले गाँज्छ । हामीले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि शान्तिको राजकुमारलाई हाम्रो जीवनमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । हाम्रो नेपालमा परमेश्वरले ठूलो काम गर्दै हुनुहुन्छ । मुखले मात्र कराएर हामी एउटै बाउका सन्तान भन्छौं । समुदायका पास्टर र अगुवाहरुले सांसारिक सल्लाह दिएर
प्रेममा धोका पाएका धेरै ख्रीष्टियनहरु छन् । मेरो पास्टर, गुरुबा र अग्रजहरुलाई अनुरोध, मण्डलीभित्र र बाहिर व्यवसाय, अफिस र ख्रीष्टियन समाजमा हाम्रो परमेश्वर
पिताको जस्तो प्रेम छ, समुद्रको पानी जस्तै सफा, एैना जस्तै छलगै देखिने प्रेम गर्ने सिकौं । हाम्रा ⋲दयका पर्खाल तोड्ने शक्तिको परमेश्वरलाई स्थान दिऔं । जसरी परमेश्वरको राज्य हाम्रो नेपालमा आयो, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि आओस् । मुखले मात्र सिकाउने होइन । पर्खाल तोडेर एक हुन सिकौं ।
कसैले पारी पुग्ने पुल भएर पारी पुराएको छ भने त्यो पुललाई बिगार्ने कोशिस नगरौं । उसैले दुःखमा थोरैले मदत गरेको भएपछि धेरै दिनेलाई पछि लागेर, थोरै दिनेको नाम निसाना नमेटौं । जसरी हामीलाई परमेश्वरले प्रेम गरेर उहाँको पुत्र दिनुभयो त्यस्तै प्रकारले हामीले अनन्तका परमेश्वरले गरेको प्रेम जस्तै निरन्तर गरौं । परमेश्वरको राज्य विस्तारमा एकताको ठूलो भूमिका हुन्छ, फुट र अरुको हानीनोक्सानी हुने, अर्कोको चरित्र हत्या हुने शब्द नबोलौं । हामी पितालाई सन्ताप दिन छोडौं । यो २०१९ ख्रीष्टमसको सन्देशले तपार्इं हाम्रो जीवनमा प्रशस्त आशिष होस्, भत्किएको पर्खाल बनोस्, बिग्रिएको सम्बन्ध जोडियोस् । शरीर, आत्मा, प्राण र अर्थमा तपाईंलाई प्रशस्त भएको होस् ।
संसारमा सबैभन्दा बढी मानिसहरुले मनाउने चाड ख्रीष्टमस हो । संसारमा धेरै बैज्ञानिकहरु ख्रीष्टियनहरु थिए र छन् ।
१. आईज्याक न्यूटन
२. लर्ड केल्मिन
३. लुई पास्चर
४. जोहन केप्लर
५. रोबर्ट बोय
६. अल्बर्ट आइन्सटाइन
७. निकोलस् कोपर्निकस
८. रेने डरेकार्टस्
९. माइकल फारोड
१०. पावल डेभिस
११. जेम्स टूर
१२. जर्ज कोइन
१३. जोन ओकिफे
१४. रोजर पेनरोज
१५. फ्र्याङ्क जिन्डर
१६. डा. जेम्स स्ट्रेन्ज
हामी नेपाली ख्रीष्टियन त्यतिकै भएका छैनौं । ख्रीष्टियन धनी, विद्वान, बैज्ञानिक प्रशस्तै छन् । यो ख्रीष्टियन समुदायमा परमेश्वरले सबैलाई एक उचाइमा पुर्‍याउनु भएकोहोस् ।
लेखको सानो परिचय
नामः विशप डा. डम्बर अधिकारी
ठेगानाः युरोपको जर्मन
चर्चः ICC Church Germany
सेवाः Director of IMF
Associate Director Logos Bible College
Head of European Ambassador of FNCN Nepal
Pastor of ICC Church Herne, Germany
इन्टर नेसनल मिसनेरी फेलोसिप चर्च प्यान्टि∙ संस्थाका संस्थापक विशप डा. डम्बर अधिकारी स्वयम् हुनुहुन्छ ।
यसको दशवटा प्रोजेक्ट छ । २८ वटा देशको भ्रमण गरी ३५० भन्दा बढी स्थानमा बोलिसक्नुभएको छ । १२५ मुलुकका मानिसहरुलाई सु–समाचार सुनाइसक्नुभएको छ ।
हजारौं हजार नेपाली बाइबल युरोपमा पुराइसक्नुभएको छ साथै १६ भाषाको बाइबल वितरण गरिसक्नुभएको छ ।
Posted on November 28, 2020 November 29, 2020 by BACHAN TV
२७ नोभेम्बर २०२० ।
राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालको भर्चुअल विधि जुम एप मार्फत दोस्रो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । महासंघ नेपालको प्रवासी तथा गैह्र आवासीय विभागले आयोजनाले दोस्रो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको थियो ।
विभिन्न देशमा रहेका नेपाली भाषिक ख्रीष्टियनहरुको सहभागिता रहेको थियो । सो सम्मेलनमा नेपाली इसाई मण्डलीका बरिष्ठ पाष्टर रोर्बट कार्थकले वचनको सेवकाइ गर्नुभएको थियो । कोरोना केही समयपछि हराएर जान्छ तर परमेश्वरको करुणा सधैं रहिरहन्छ भनेर उपस्थित सबैलाई उत्साह दिनुभएको थियो । पाष्टर कार्थक सबै भन्दा बृद्ध र लामो समय पाष्टरीय सेवकाई निरन्तर लागिरहनु भएको छ । उहाँको सुस्वास्थ्यको लागि महासंघको सह अध्यक्ष पा. फिलोमन क्षेत्रीले प्रार्थना गरिदिनुभएको थियो । पाष्टर क्षेत्रीले नै सम्मेलनको सुरुको प्रार्थना गर्नुभएको थियो ।
महासंघका अष्ट्रेलियाका प्रमुख मुना पाण्डेले स्वागत गर्नुभएको थियो भने महासंघको अध्यक्ष सिवी गहतराजले स्वागत मन्तब्य गर्नुभएको थियो ।
अमेरिका स्थित लाइभ चर्चका टिमले आराधनामा अगुवाइ गर्नुभएको थियो ।
अन्तराष्ट्रिय विभागका प्रमुख रिता थापा मगरले महासंघको मिसन र भिजनमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
एनसिएसका प्रतिनीधि नारायण खड्का एकताको खडेरी रहेको कुरा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
पाष्टर भोज भटट्ले महासंघ किन चाहियो भन्ने विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । महासंघ लगायत अरु समाजमा आफू न भित्र न बाहिरको अवस्थामा रहेका जानकारी समेत गराउनु भएको थियो ।
अधिवक्ता तथा पाष्टर बुद्ध घिसिङले कानूनी विषयमा चर्चापरिर्चा गर्नुभएको थियो । अहिले नेपालको मूल कानूनबाट नेपाली ख्रीष्टियन समुदायलाई असर परेको र यसको समधानको लागि महासंघको अगाडि बढेको जानकारी गराउनु भएको थियो ।
गायिका अन्जु पन्तले केही ख्रीष्टियन भजन गीत र आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव बाँड्नु भएको थियो । कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
डा. पाष्टर मनोज श्रेष्ठ (अमेरिका), प्रवासी तथा गैह्र आवासीय विभागका प्रमुख रेभ. पाष्टर निमा घिसिङ (अमेरिका), युरोप महादेश प्रमुख विशप रेभ. डम्बर अधिकारी (जर्मन), एसिया महादेश प्रमुख तथा विभाग सचिव रेभ. पाष्टर राजु बराइली (हङ्गकङ्ग) ले पनि बोल्नु भएको थियो ।
प्रवासी तथा गैह्र आवासीय विभागका सह प्रमुख रेभ. प्रकाश मेघी गुरुङले संचालन गर्नुभएको थियो ।
विभिन्न प्रश्नहरुको जवाफ महासंघको अध्यक्ष सिवी गहतराज, रेभ. पाष्टर निमा घिसिङ (अमेरिका), सह अध्यक्ष तथा अन्तराष्ट्रिय विभाग प्रमुख रीता थापा, कानूनीक सल्लाहकार बुद्ध घिसिङले लगायत दिनुभएको थियो ।
Posted on September 2, 2020 September 2, 2020 by BACHAN TV
World Health Organization (WHO) अथवा विश्व स्वास्थ्य संगठनको लोगोलाई लिएर यसरी बर्णन गर्ने एक पक्षका क्रिश्चियनहरु पनि छन् :-
“WHO को लोगो हेर्नुस् । एउटा लठ्ठीमा सर्प बेरिएको छ । जो बिश्वभर हावी छ । यो सर्प त्यही सैतान devil सर्पको प्रतिक हो । जसले इभ र आदमलाई स्याउ खान उक्साएको थियो । लठ्ठी चाहिँ त्यही स्याउको रुखको प्रतीक हो । जुन रुखमा त्यो सैतान बेरिएको थियो । सैतान धर्म मान्ने अर्थात लुसिफरियनहरु त्यही सर्पलाई बढी मान्छ्न्…….” आदि इत्यादि ।।।।
यदी तपाईं यी माथि बर्णन गरिए जस्तै सर्पलाई सैतान मानिरहनुभएको छ भने तपाईं अन्धभक्त क्रिश्चियन हुनुहुन्छ ।
सर्प सैतान होइन । सर्प सृष्टिका लाखौं प्राणीहरु मध्ये एक साधारण प्राणी हो । बिश्वभर सर्पका ३४०० प्रजातिहरु छन् । यी मध्ये लगभग ३०० प्रजातिका सर्पहरु बिषालु हुन्छन् । बिषालु सर्पले डसे पछि मान्छे मर्ने भएकोले मान्छेले सर्पलाई नकारात्मक रुपले हेर्न थालेका हुन् । नकारात्मक रुपले हेर्ने भएकोले मान्छेले सर्पलाई नकारात्मक शक्ति शैतानसँग दाँज्न शुरु गरेका हुन् । तर सर्प आफैमा सैतान भने होइन ।
अदनको बगैचामा रहेको आदम र हब्बा (इभ) ले खाएको कुन फल हो ? अझैसम्म निश्चित भएको छैन । त्यसैले त्यो फललाई स्याउ मान्नु पनि अन्धभक्त क्रिश्चियन हुनु हो ।
सैतान धर्म मान्ने वा लुसिफरियनहरु त्यही सर्पलाई बढी मान्छन् भन्नू पनि अन्धभक्त क्रिश्चियन हुनु हो । किनकि क्रिश्चियन बाहेक अरुलाई न लुसिफर थाहा छ । न सैतानलाई सर्प भन्छ भन्ने थाहा छ । न सैतान नै सर्प भन्ने थाहा छ । बरु यी कुराहरु क्रिश्चियनहरुलाई नै बढी थाहा छ । किनकि क्रिश्चियनले नै बढी लुसिफर मान्ने गर्दछ ।
अब हेरौं । किन मेडिकल साइन्ससंग सम्बन्धित स्वास्थ्य संघ संगठनहरुका प्राय सबै लोगोमा सर्प बटारिएका हुन्छन् ? यसका आफ-आफ्नै धारणाहरु भएपनि ती धारणाहरु मध्ये एउटा बाइबलबाट पनि लिइएको छ ।
बाइबलमा यसरी बर्णन गरिएको छ ::
“तब परमप्रभुले ती मानिसहरूका बीचमा विषालु सर्पहरू पठाइदिनुभयो, र सर्पले मानिसहरूलाई डसे, र इस्राएलीहरूका धेरै जना मरे। अनि मोशाकहाँ आएर मानिसहरूले भने, “परमप्रभु र तपाईंको विरुद्धमा बोलेर हामीले पाप गरेका छौं। उहाँले हामीबाट यी सर्पहरू हटाइदेऊन् भनी परमप्रभुलाई प्रार्थना गर्नुहोस्‌।” तब मोशाले ती मानिसहरूका निम्‍ति प्रार्थना गरे। परमप्रभुले मोशालाई भन्‍नुभयो, “तैंले विषालु सर्पको एउटा प्रतिमा बनाएर त्‍यसलाई एउटा खामामा झुण्‍ड्या। सर्पले डसेकाहरूले त्‍यसलाई हेरेपछि तिनीहरू बाँच्‍नेछन्‌।” तब मोशाले एउटा काँसाको सर्प बनाएर त्‍यसलाई एउटा खामामा झुण्‍ड्याए। सर्पले डसेका सबैले काँसाको सर्पलाई हेरेपछि बाँचे।” (गन्ती 21:6‭-‬9)
यस बाइबलका खण्डमा सर्पले डसेर मर्न लागेका मान्छेहरु सर्प कै आकृति हेर्दा बाँचेका थिए । अर्थात् सर्पले डसेको मान्छेको लागि जुन औषधि प्रयोग हुन्छ । त्यो औषधि सर्प कै बिषबाट बनाएको हुन्छ । यो मेडिकल साइन्सको आविष्कार हो । यही आविष्कारको कुरा बाइबलमा प्रतिकात्मक रुपमा हजारौं बर्ष अघि बर्णन गरिएको थियो ।
यदि सर्प सैतान हो भने परमेश्वरले मोशालाई किन सर्प बनाउन लगाउनुभयो ? अब के परमेश्वरले सैतान बनाउन लगाउनुभो भन्न मिल्छ ? अनि सर्प हेरेपछि निको हुनेहरुले के सैतानलाई देखेपछि निको भएका हुन् भन्न मिल्छ र ?
अर्को कुरा मत्ती 10:16 मा सर्प झैं चनाखो हुनु भनेको छ । के अब यसलाई सैतान जस्तै चनाखो हुनु भनेको हो भन्न मिल्छ ?
त्यस्कारण सर्प आफैमा सैतान होइन भन्ने मानसिकता आफूमा सृजना गरौं । अनि लोगोहरुमा, चित्रहरुमा, मुभिहरुमा, भिडियोहरुमा, पुस्तकहरुमा, मन्दिरहरुमा, डकुमेन्ट्रीहरुमा, सपनामा, बिपनामा सर्प देख्ने बित्तिकै “सैतान” भन्ने मानसिकता त्याग्यौं ।
Himal Limbu Maden Fenduwa
Posted on July 27, 2020 July 27, 2020 by BACHAN TV
२७ जुलाई २०२० मा ललितपुरस्थित क्वालिटी व्याङक्वेटमा सँग–सँगै सिकौं भन्ने विषयमा एक दिने नेपाली ख्रीष्टियन मिडिया तालिम सम्पन्न भएको छ । सो कार्यक्रममा शुरुको प्रार्थना पा. राजेश पन्तले गर्नुभएको थियो भने संचालनद्धय दिनेश श्रेष्ठ र हिरा खड्गीले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा डा. विपी खनालले ख्रीष्टियन मिडियाको इतिहासको बारेमा विस्तृत रुपमा चर्चापरिचर्चा गर्नुभएको थियो । उहाँले ख्रीष्टियन मिडिया यहाँसम्म आउनुमा धेरै अग्रजहरुको योगदान बारे बताउनु भएको थियो । साथै ख्रीष्टियन मिडियाहरु धेरै नै अघि बढेको उहाँको ठम्याइ छ ।
संचारकर्मी कुमारसिंह बिष्टले ख्रीष्टियन मिडियाले नेपालमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनु भएको थियो । मिडियाले सुसमाचार, चेला निर्माण केन्द्रिय हुनु पर्दछ साथै मण्डलीको हितको लागि कार्य गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
नेपाली ख्रीष्टियन मिडियाको वर्तमान अवस्थाको बारेमा विश्वास थापाले बताउनु भएको थियो । उहाँले नेपाली ख्रीष्टियन मिडियाकर्मी कोष खडा गर्नु पर्ने अवस्था देखेको बताउनु भयो । संचारकर्मी गाह्रो समयमा, विरामी भएमा वा अन्य भैइपरि आउने सम्भावना देख्दै यो कोष गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले तत्काल १० हजार सो कोष दिने बताउनु भएको थियो ।
सुमित नेपालीले मिडियाकर्मीलाई विभिन्न भिडियो कसरी खिच्ने भनेर सिकाउनु भयो । उहाँले क्यामरा थिच्ने होइन, खिच्ने हुनु पर्दछ भन्ने बताउनु भयो । साथै भिडियो खीच्दा हुने गल्तीहरु र सही कसरी खीच्ने भनेर डेमो देखाउनु भएको थियो । साथै दिनेश श्रेष्ठले मिडियाको अवस्था र खेलेको भूमिकाका चर्चा गर्नुभएको थियो ।
हिरा खड्गीले नेपाली ख्रीष्टियन मिडियाको प्रतिविम्बित र बृद्धी बारेमा प्रष्टसँग सिकाउनु भएको थियो । सँगसँगै कसरी सिक्ने र कसरी अघि बढ्ने भनेर सिकाउनु भएको थियो । बृद्धीको योजना कस्तो हुनुपर्दछ ? हाम्रा गल्ती केके हुन् ? कसरी आफूलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने भन्ने बारेमा प्रष्ट खाका दिनु भएको थियो ।
सफल मिडियाकर्मीको संकेतको बारेमा पनि चर्चा गर्नुभएको थियो साथै कसरी गल्तीलाई सुधार्दै फेरी आफ्नो काममा केन्द्रित हुने कुरा सरल प्रकारले सिकाउनु भयो ।
Posted on July 25, 2020 July 25, 2020 by BACHAN TV
एक समारोहको बीचमा प्रसिद्ध लेखक तथा बक्ता पा. लाजरस थुलुङद्धारा लिखित जीवनका आँधीबेहरीहरुमा परमेश्वरसँगको घनिष्टतामा हिँड्नु नामक पुस्तक २४ जुलाई २०२० मा गौशालाको एक होटलमा बिमोचन भएको थियो । सो समारोहको संचारकर्मी महिमा भट्टराईले संचालन गरेकी थिएन भने सो पुस्तकको बारेमा डा. महेन्द्र भट्टराई र अधिवक्ता बुद्ध घिसिङले पुस्तकको बताउनु भएको थियो ।
सो पुस्तकको संयुक्त रुपमा बिमोचन रेभ. मंगलमान महर्जन, डा. महेन्द्र भट्टराई, पा. तेज जिरेल, सफल व्यवसायी रामचन्द्र्र तिमोथी, र पा. डिके दानिएलले गर्नुभएको थियो । लगतै रेभ. मंगलमान महर्जनले पुस्तक डेडिकेसनको प्रार्थना गरिदिनुभएको थियो ।
उत्साहको शब्दहरु क्रमश पा.चन्द्र श्रेष्ठ, राजु सुन्दास र धुब्र शिष्यले आफ्नो विचार राख्नुभएको थियो । ध्रुव शिष्यले सामाजिक संचालको प्रयोग गरि भिडियोबाट लाइभ सन्देश दिनुभएको थियो । प्रसिद्ध गायक एड्र्रिन देवान २ वटा गीत जुम सामाजिक संजालको प्रयोग गरि आफनो प्रस्तुति दिनु भएको थियो भने गायिका शुस्मा विश्वकर्माले कति घुँडाहरुको बोलको गीतद्धारा आशिषत बनाइकी थिएन ।
लेखकले २१ औं पुस्तकरुपमा बजारमा ल्याउन पाउदा खुशी व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाले सो पुस्तक बारेमा आफ्नो धारण राख्नुभएको थियो । क्रमश शुरु र अन्तिम प्राार्थना डा. अरविन पोखरेल र पा. वर्णबास श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो । सो कार्यक्रम सामाजिक संजालमा लाइभ गरिएको थियो ।
Posted on June 20, 2020 June 20, 2020 by BACHAN TV
अपांग बाल शिक्षा सराेकार केन्द्र बिर्तामोड झापाका बाल बालिकाहरुलाई इम्मानुएल नेपाली चर्च,फक्सटन युकेले खाध्यान्न सहयाेग गर्नुका साथै नगद प्रदान गरेकाे छ। लामाे समयकाे लकडाउनकाे कारण शारीरिकरुपमा अशक्त बालबालिकाहरुलाई खाध्यान्न संकट भएको जानकारी स्थानिय प्रार्थना भवन मण्डली,बिर्तामोडका पाष्टर गंगा अालेले जानकारी गराउनुभए पश्चात युके स्थित नेपाली चर्चले खाध्यान्न सहयाेग पठाएको इम्मानुएल नेपाली चर्च युकेका एल्डर सुबास लिम्बुले बताए ।
“खाध्यान्न अभाव भएको समयमा सम्झेर हाम्राे नानीहरूलाई भाेकभाेकै बस्नबाट बचाई सात डाँडा पारि बाट सहयाेग गर्नुहुने नेपाली चर्च युके परिवारलाई हामी हृदयबाट नमन गर्दछाै।” सहयाेग बुझ्दै अपांग बाल शिक्षा सराेकार केन्द्र, बिर्तामोडका अध्यक्ष कृष्ण देब दुलालले बताउनुभयाे। साे बाल सराेकार केन्द्रमा १४ जना शारीरिक रुपमा अशक्त बालबालिकाले अाश्रयलिई अध्ययन गरिरहेका छन।त्यसैगरी इटहरी, इक्राई,चतरा र धरानका अति विपन्न एकल महिला र शारीरिक रुपमा अशक्त भएका २८ परिवारलाई खाध्यान्न सहयाेग स्वरुप १ बाेरा चामल,दाल,तेल,नुन चिनी,चियापती,न्युटेला,चना र साबुन प्रदान गर्नुका साथै भाेकाहरुलाई निशुल्क भाेजन वितरण कार्यकाे लागि अभियानकर्ता विश्वास थापालाई रू. दश हजार प्रदान गरेकाे छ। यस अघि उक्त चर्चले बिराटनगरका अति विपन्न तथा एकल महिलाकाे ३२ परिवारलाई खाध्यान्न र नगद सहयाेग प्रदान गरेकाे थियाे। “हाम्राे शरिर युकेमा छ तर हृदय नेपालमा, संकटकाे बेला हामी हाम्राे दाजुभाई,दिदीबहिनीहरुकाे साथमा सदा रहनेछाै।” इम्मानुएल नेपाली चर्च,युकेका डिकन तथा समाजसेवी तिल कुमारी (एस्तर)लिम्बुले बताईन। यस खाध्यान्न सहयाेग वितरण कार्यकाे संयाेजन इम्मानुएल कृपा चर्च,धरानका वरिष्ठ पाष्टर रेभ.हिमाल जाेसेफ राईले गर्नुभएको थियाे।
Posted on June 9, 2020 June 9, 2020 by BACHAN TV
काेभीड-१९काे महामारीको कारण लामाे समयकाे लकडाउनले खाध्यान्न संकटकाे सामना गरिरहेका १०२ परिवारलाई नेपाल राष्ट्रिय मण्डली संगति प्रदेश नं. १ र प्रदेश नं.१ इसाई समाजले संयुक्तरूपमा धरान ख्रीष्टियन समाजद्वारा सामाजिक दुरी कायम राख्दै राहत वितरण गरेकाे छ। धरानका २०वटा मण्डलीका अति विपन्न परिवारलाई पहिलाे चरणमा राहत प्रदान गरिएको समाजका अध्यक्ष रेभ.शामुयल राईले बताउनुभयाे। हामी क्रमश:धरानमा भएको मण्डलीका अति विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गर्दै जानेछाै राहत वितरण कार्यक्रममा प्रदेश नं.१ इसाई समाजका महासचिव पा.मेहरमान ह्युज गिरीले बताउनुभयाे। धेरै दिनकाे लकडाउनकाे कारणले कमाएर परिवारलाई धान्न गाराे भएकाे अवस्थामा याे राहतले ठुलो गुन लगाएकाे नव जीवन चर्च,धरान-१२का टेम्पाे चालक बीर बहादुर मगरले खुशी हुदै बताए । “के खाने हाेला भनेर प्रार्थना गरिरहेकाे बेला परमेश्वरले यसरी जुटाउनुभयाे। हाम्राे परमेश्वर यहाेवा यिरे हुनुहुन्छ।” चामलकाे बाेरामा नाम्लाे कस्दै धरान-१५ गणतन्त्र टाेल निवासी नानी माया बिकले बताईन। राहत स्वरुप १ बाेरा चामल,दाल र तेल उपलब्ध गराएकाे एन सि एफ र एन सि एसकाे संयुक्त प्रकाेप राहत सेवा समितिका प्रदेश १ संयाेजक तथा नेपाल राष्ट्रिय मण्डली संगतिका केन्द्रिय सहसचिव रेभ.हिमाल जाेसेफ राईले जानकारी दिनुभयाे। अाउदाे दिनहरुमा रेड जाेनमा परेकाे प्रदेश नं.१का विभिन्न स्थानहरुमा राहत वितरण कार्य गर्दै जाने रेभ.राईले बताउनुभयाे। राहत वितरण कार्यमा नेपाल ख्रीष्टियन समाजका सचिव रेभ.कुबेर गुरुङज्युकाे पनि सहभागीता रहेकाे थियाे।
Posted on May 9, 2020 by BACHAN TV
निशुल्क खाना खुवाउने अभियानमा मण्डलीले साथ दिदैं
Posted on May 4, 2020 May 4, 2020 by BACHAN TV
बैशाख/महामारी रोग कोरोनाबाट बच्न नेपाल सरकारले गरेको लकडाउन अवधि करिब दुई महिना पुग्नै लागेको छ । लकडाउनको कारण दैनिक काम गरेर आफ्नो खर्च धान्ने मज्दुरहरु बढी मारमा परेका छन् ।
यस्तो जटिल अबस्थामा एक समाजसेवी ब्यक्तित्व तुलसी श्रेष्ठले काठमाडौंमा निशुल्क खाना खुवाउने अभियान सुरु गर्नुभएको छ । अभियन्ता तुलसी श्रेष्ठका अनुसार अभियानमा निशुल्क खाना खुवाउन थालेको १४ दिन पुगेको र आफूले सुरु गरेको अभियानमा धेरै ब्यक्तिको साथ र सहयोग जुट्न थालेको बताउनु भएको छ ।
अभियन्ता तुलसी श्रेष्टले अहिलेसम्म ११सय जनालाई राहात वितरण गर्नुभएको , र दिनमा ४०० जनालाई निशुल्क खाना खुवाउदै आएको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँको यो अभियानमा साथ दिन धेरै व्यक्तित्वहरु जुटिरहनु भएको छ । हाल यो सेवा काठमाण्डौं र ललितपुरका बिभिन्न १२ स्थानहरुमा उपलब्ध गराइरहेको छ तथा बिर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा पनि मिती बैसाख २३ गते बाट खाना उपलब्ध गराइने जानकारी अभियान्ता श्रेष्ठले दिनुभएको छ ।
यसैगरी अभियानलाई सफल पार्न इम्मानुयल कृपा चर्च १५ धरानले यस्तो जटिल प्रस्थितिमा भोकलाई भोजन जुटाउने असल अभियानमा सबै लाग्नु पर्छ भन्दै अभियानको लागि सात हजार सहयोग गरेको छ । ईम्मानुयल कृपा चर्चको तर्फबाट अभियानमा खटिरहनु भएका सबै संवयसेवकहरुलाई पनि धन्यवाद दिनु भएको छ । साथै बिश्वभरि छरिएर रहेका सम्पुर्ण मण्डलीहरुलाई ईम्मानुयल कृपा चर्चका रेभ.पा. हिमाल रार्ई ज्यूले यो महामारीमा आर्थिक सहयोग निम्ती सबैमा अपिल समेत गर्नुभएको छ ।
बिस्तृत जानकारीको लागी तुलसी श्रेष्ठ : ९८६३३२२७९३